Aano Waa Aaf!
(Hadhwanaagnews) Monday, May 14, 2018 08:17:30
Sida aannu samaynno sannad walba markay barwaaqo noqoto, aniga iyo dhammaan kuray-xoogllayaasha, doobabka, iyo nin walba oo haasaawe
Sida aannu samaynno sannad walba markay barwaaqo noqoto, aniga iyo dhammaan kuray-xoogllayaasha, doobabka, iyo
nin walba oo haasaawe iyo haween doon ahi, marka geelasha la xereeyo, caano geelnna laga soo wada dhergo, ayaannu hadba meeshii ay ciyaari kajirto u ciyaar gudnnaa. Habeen walba reerkii hablo lagu tuhmayo ayaa laga ag botoriyaa. Hablaha qudhoodu waa soo ciyaar gudaan, oo hasaawe iyo hawraarba ka helaaan. Islatagga ayaa bata barwaaqada, meesha ugu badan ee raggu ka gaataan ilaalayn kaddib waa ciyaarahan oo kale. Abaar iyo omos cidina isma guursato, oo cidwaliba noloshay la xarbiyaysaa. Inkastoo aan habeenwalba cayaar gudi jiray haddana weli maan helin inantii aan ku hamiyi jiray. Aabbahay ayaan talo iyo tusaale marwalba waydiisan jiray. Habeen annakoo geela horfadhina ayuu si kedis ah su’aal ii wayddiiyay. Waxa uu yidhi waar Rooblow horta aabbe miyaadan guurba hadal hayn siday waxkaa yihiin? Aniga qudhayda oo beryahaaba guux iyo gabadh raadis ahaa ayaa hadalkaasina dab igu sii furay. Odaygii aabbahay ahaa intaanan su’aashiiba ka jawaabin ayuu mid kale ii raaciyay o waxa uu yidhi; horta aabbe maxaad ku dooran lahayd qofta dumarka ah ee aad uxilanayso ama aad guursandoonto haddii Alle idmo? Laba su’aalod ayaa mar igu wada kulmay.